ငှားမည်၊ ခုနှစ်မိုင်ကုန်းမြင့်ရိပ်သာ၊ မရမ်းကုန်း။5.5 သိန်း(တလ) - Home Myan
ငှားမည်၊ ခုနှစ်မိုင်ကုန်းမြင့်ရိပ်သာ၊ မရမ်းကုန်း။5.5 သိန်း(တလ)
536 Views August 20, 2018
တထပ်ခွဲ(အုတ်ညှပ်တိုက်) ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ ရေချိုးခန်း(၂)
A/C (၂)လုံး။ ခြံ (43’x 95′) အိမ် (30’x 40′) အ၀ီစိရေ/ ဂျိုးဖြူရေ/
ကားနှစ်စီးရပ်/ ခြံနောက်မြေပို၊ ၃၀ပေခန့်ရှိ။(အကျိုးဆောင်လက်ခံသည်)
TEL : 0950- 72745/ 0931465160
၇၅’*၁၅၀’ မြေပေါ်ရှိ၊ ၄ထပ်တိုက်အသစ်၊ ညှိနိုင်းအမြန်ရောင်းမည်။
952 Views May 31, 2018
လှိုင်သာယာမြို့နယ်! နဝဒေး ဥယျာဉ် အ်ိမ်ရာတွင် (40×60)အကျယ်ရှိ 2RC အား အမြန်ရောင်းလိုပါသည်။
233 Views July 29, 2018
199 Views June 11, 2018
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ (7)မိုင်၊ကုန်းမြင့်ရိပ်သာတွင် (40’X60′) မြေကွက်ရောင်းမည်။
160 Views September 9, 2019
ကန်​တော်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်အနီး၊ ဗဟန်း၊31/2 RC ရောင်းမည်။
293 Views September 9, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ကျောက်ကုန်းလမ်းမတွင် ၊ မြေညီထပ် (20’×50′) ဆိုင်ခန်း၊ရုံးခန်းရောင်းမည်။(စီးပွားရေးလုပ်နိုင်သည်)K-1650 L (ညှိနှိုင်း)
315 Views September 9, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ Green Inya 1 Condo (6 လွှာ ) ငှားရန်ရှိသည်။
148 Views July 13, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ Green Inya 1 Condo (12 လွှာ ) ငှားရန်ရှိသည်။
188 Views July 13, 2019
အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ ရတနာပုံလမ်း ၊ အ နောက်ရပ်ကွက် ၊ လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
181 Views July 13, 2019
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း ၊ Junction ဇ၀နအနီး ၊ Tosta Plaza (5) လွှာ Condo ငှားရန်ရှိသည်။
152 Views July 6, 2019
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း ၊ Junction ဇ၀နအနီး ၊ Tosta Plaza (5) လွှာ Condo ရောင်းရန်ရှိသည်။
194 Views July 6, 2019
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊မြိုင်တန်းသာလမ်း (3) လွှာ တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
157 Views July 6, 2019
လှိုင်မြို့နယ် ၊ (8) ရပ် ကွက် သုခမြိုင်လမ်း မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
175 Views June 21, 2019
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး ၊ (6) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
162 Views June 19, 2019
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊သုမင်္ဂလာလမ်း (2) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
139 Views June 19, 2019
တ/ဥ မြို့နယ် ၊တ ကောင်း (4) လမ်း (5) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
145 Views June 19, 2019
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊သီရိမင်္ဂလာလမ်း မြေညီ ၊ပထမထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
155 Views June 19, 2019
အလုံမြို့နယ် ၊ မ နော်ဟရီလမ်းထိပ် ၊ (3) လွှာတိုက်ခန်း Hall Type ရောင်းရန်ရှိသည်။
180 Views June 18, 2019
အလုံမြို့နယ် ၊ မ နော်ဟရီလမ်းထိပ် ၊ (3) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
246 Views June 18, 2019
တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ အင်းဝအိမ်ရာ မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
215 Views June 17, 2019
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၊ သရက်တောလမ်း ၊ မြေ ကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်။
160 Views June 17, 2019
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ပဒုမ္မာလမ်း ၊ (3) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
167 Views June 15, 2019
ကမ္ဘာအေး ၊ဗီလာ (8) မိုင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ (4) လွှာ Condo ငှားရန်ရှိသည်။
159 Views June 15, 2019
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ BN(2) ထပ်တိုက်ရောင်းရန်ရှိသည်။
153 Views June 15, 2019
တာမွေမြို့နယ် ၊ ဗိုလ်လ ရောင်လမ်း တိုက်ခန်း (4) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
157 Views June 15, 2019
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ 41 ရပ်ကွက် ၊ကြာပဒုမ္မာလမ်း2RC ရောင်းရန်ရှိသည်။
222 Views June 15, 2019
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ရာဇဓရာဇ် လမ်းနှင့် မန္တာလေးလမ်းထောင့်4ထပ်ခွဲ (motel) ရောင်းရန်ရှိသည်။
211 Views June 14, 2019
ရန်ကုန်တိုင်း / Kyauktada Township
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊38 လမ်း အလမ်း အလယ် ဘ လောက်(4) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
153 Views June 14, 2019
အလုံမြို့နယ် ၊ ငုဝါလမ်း (5) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
200 Views June 14, 2019
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ 40 ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ၊ BN 1 ထပ်ခွဲရောင်းရန်ရှိသည်။
209 Views June 14, 2019
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း ( 2) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
221 Views June 14, 2019
တာမွေမြို့နယ် ၊ ကျိုက္ကစံ အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ (2) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်းရန
232 Views June 14, 2019
RENT , BAHAN T/S , $1800,2MBR,1BR,CONDO , FURNITURE, REF : 02
RENT , $ 540 , 1MBR , 1BR , APARTMENT , ( LIFT ) , FURNITURE , YANKIN T/S , REF : 03
201 Views May 8, 2019
RENT , $ 2900 , 5MBR HOUSE , FURNITURE , MYANGONE T/S . REF : 01
203 Views May 8, 2019
RENT , $500 , 1 st Fl , Pataythar St , Kamayut T/S
144 Views May 8, 2019
RENT ,5.5 L , HK2G Fl , Thrimingalar St , Sanchaung T/S .
150 Views May 6, 2019
RENT , 12 L , 8 Fl , Myittar St,Pent House , South Okkalapa T/S
146 Views May 6, 2019
RENT , 30 L , 1 1/2 RC , Botaza St , Innsein T/S .
181 Views May 6, 2019
RENT , 25 L , 2RC, Thrimingalar St , Insein T/S
147 Views May 4, 2019
RENT , 13 L , Condo6Fl , BoMyatTun St , Botahtaung T/S
149 Views May 4, 2019
RENT , 7.5 L,6FL , Minicondo Thuwanna Kamarkyi St , Thingangyun T/S
174 Views May 4, 2019
RENT , 18 L , 2RC , Zawana Snow Garden , Thingangyun T /S
139 Views May 4, 2019
RENT ,6L , Parami Condo ,9Fl , Hlaing T/S
164 Views May 4, 2019
ရန်ကုန်တိုင်း / Thaketa Township
RENT , 7.5 L , MyakwaNyo Condo6Fl , Thakata T/S .
162 Views May 4, 2019
RENT , 25 L, 2RC Thuwanna Danatheikdi St ,Thingangyun T /S .
161 Views May 4, 2019
RENT , 14 L , 1RC, Shwe Hnin Si St , Mayangone T/S
148 Views May 4, 2019
RENT , 11L,Yan Aye House,Grond Fl , Yankin T/S
157 Views May 4, 2019
RENT , 15 L , 2RC Innwa House , South Dagon T/S
158 Views May 4, 2019
RENT , $ 2000 , Condo6Fl , Kan St , La Min Condo , Hlaing T/S
181 Views May 3, 2019
RENT ,$2500 ,21/2 RC , Nanthar St , Ahlone T/S .
176 Views May 3, 2019
RENT ,$1300 ,3 Fl ,4 Fl , Myaingmalar St ,Yankin T/S .
152 Views May 3, 2019
RENT, $ 3000 , KER Condo 12 Fl ,Kabaraye Pagoda St , Mayangone T/S .
158 Views May 3, 2019
RENT, $ 2000 , Condo 8Fl ,Ayeyeik Thar (1) St , Bahan T/ S.
144 Views May 3, 2019
RENT9L , Condo 10 Fl , Delta PLaza , Shwegontaing St , Bahan Township ,
159 Views May 3, 2019
RENT, $ 3500/-31/2 RC9Mile,A 1 Street , Mayangone T /S .
153 Views May 2, 2019
တ/ဥ မြို့နယ် ၊(13) ရပ်ကွက် ၊ ယသာဝတီလမ်း မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
180 Views April 11, 2019
တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ 20 ရပ်ကွက် ၊ City Mart အနီး၊ လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန်ရှိသည်။
250 Views April 11, 2019
တာမွေမြို့နယ် ၊ သစ္စာဝါဒီလမ်း ၊ တာမွေလေးရပ်ကွက် ၊ (33’×50′) မြေကွက် ငှားရန်ရှိသည်။
249 Views April 10, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ပါရမီ ရိပ်သာ ၊ ကံ့ကော်မြိုင် (2) လမ်း ၊ 1RC , 2RC ၊ 2တိုက်ရောင်းရန်ရှိသည်။
185 Views April 10, 2019
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၊ အောင်စိုးမိုးလမ်း ၊ BN 1 ထပ်တိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။
228 Views April 10, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ဆရာစံတောင်ရပ်ကွက် ၊ ဦး အောင်ကျော်ဖြူလမ်း ၊ မြေညီ တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသည်။
225 Views April 10, 2019
တာမွေမြို့နယ်၊ ဗျိုင်းရေအိုးစဉ်လမ်း ၊ (6) လွှာခေါင်းရင်းခန်း ၊ ရောင်းရန်ရှိသည်။
171 Views April 10, 2019
တ/ဥ မြို့နယ် (11) ရပ်ကွက် ၊ သုမင်္ဂလာလမ်းပေါ် (2) လွှာ ၊ တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
174 Views April 10, 2019
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ (8) မိုင် (4) ရပ်ကွက် ၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း ၊ ပထမထပ် ရောင်းရန်ရှိသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ (12) ရပ်ကွက် ၊ ဘရဏီလမ်း (7) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
433 Views April 9, 2019
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ (6) ရပ်ကွက် ၊ မင်းခေါင်းလမ်း ၊ ဒုတိယထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
170 Views April 9, 2019
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ စံပယ်လမ်း BN 1 ထပ် ရောင်းရန်ရှိသည်။
168 Views April 9, 2019
ဗိုလ် တ ထောင်မြို့နယ် ၊ လမ်းသွယ် (1) , (4) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
196 Views April 9, 2019
ဗိုလ် တ ထောင်မြို့နယ် ၊လမ်းသွယ် (1) , (4) , လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
182 Views April 9, 2019
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ၊ ကန်တော်လေး ၊ 93 လမ်းရှည် ၊ (5) လွှာ တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
184 Views April 9, 2019
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၊ အ နော်ရထာလမ်းမ (5) လွှာတိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်။
171 Views April 9, 2019
ဒဂုံမြို့နယ် ၊ သမ္မတ Condo (6)လွှာ ငှားရန်ရှိသည်။
205 Views April 9, 2019
လိ်ှုင်မြို့နယ် ၊ ဇေယျာသိဒ္ဒိ (4) လမ်း (5) လွှာခေါင်းရင်းခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်။
175 Views April 2, 2019
ဗဟန်းမြို့နယ် , မြလမ်း (6) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
170 Views April 2, 2019
ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ကျိုက္ကစံရပ် ကွက် မြလမ်း (5) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
156 Views April 2, 2019
တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ရွာသာကြီးစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အနီး ၊ December အိမ်ရာ (3) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
198 Views March 13, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ကျောက်ကုန်းလမ်း ၊ 1 RC ရောင်းရန်ရှိသည်။
218 Views March 13, 2019
လှိုင်မြို့နယ် ၊ (1) ရပ်ကွက် ၊ ဇေယျသိဒ္ဒိ(4) လမ်း (5) လွှာခေါင်းရင်းရောင်းရန်ရှိသည်။
234 Views March 13, 2019
ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ကျိုက္ကစံရပ်ကွက် မြလမ်း (6) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
211 Views March 13, 2019
ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ကျိုက္ကစံရပ်ကွက် ၊ မြလမ်း (5) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
239 Views March 13, 2019
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ Thuwana VIP2၊ သုခိတာလမ်း 2ထပ်ခွဲ RC ငှားရန်ရှိသည်။
221 Views March 13, 2019
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ၊ 93လမ်း (7) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
164 Views March 13, 2019
မြောက်ဒဂုံ (32) Quarter ၊အေးမြသာယာလမ်း 2ထပ်အိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
196 Views March 13, 2019
လှိုင်မြို့နယ် ၊ သီရိမြိုင် 8လမ်း (4) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
206 Views March 13, 2019
လှိုင်မြို့နယ် ၊ သုခမြိုင်လမ်း မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
250 Views March 13, 2019
တ/ဥမြို့နယ် ၊ ကံ့ကော်ရိပ်သာလမ်း ၊ဘယ် ၊ညာနှစ်ဖက် မြေညီ၊ တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
158 Views March 13, 2019
တဖက်7L
တာမွေမြို့နယ် ၊ ပျားရည်ကုန်လမ်း ပထမထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
186 Views March 13, 2019
ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ နာနတ်တောလမ်း (4) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
219 Views March 13, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်အေးအိမ်ရာ မြေညီထပ် ငှားရန်ရှိသည်။
181 Views March 13, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်အေးအိမ်ရာ ၊ မြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
216 Views March 13, 2019
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊မဟာမန္ဒုလမ်းနှင့်39 လမ်းထောင့် ၊အလယ်ဘ လောက် (8) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
204 Views March 13, 2019
မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ်၊ 125 လမ်း ၊ City Mart မျက်နှာချင်းဆိုင် (4) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မင်းရဲကျော်စွာ (1) လမ်း ဒုတိယထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
171 Views March 13, 2019
အ ရှေ့ဒဂုံ ၊3Quarter 1 RC ရောင်းရန်ရှိသည်။
155 Views March 13, 2019
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ကေတုမာလာ ၊4Quarter (2) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
189 Views March 13, 2019
တောင်ဒဂုံ 25 ရပ် ကွက် ၊ ယုဇနလမ်း မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
249 Views March 13, 2019
မြောက်ဥက္ကလာ ၊ သုဓမ္မာလမ်း ၊ ကန်သာယာလမ်းဆုံ (4) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
210 Views March 13, 2019
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ၊ 114 လမ်း မြေညီ တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
209 Views March 13, 2019
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊ ထောက်ကြံ့ ၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်း BN 1 ထပ်တိုက်ရောင်းရန်ရှိသည်။
241 Views March 13, 2019
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ၊ Olympic Tower (11) လွှာ ရောင်းရန်ရှိသည်။
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ခေမာသီလမ်း ၊ ခြံ ၊အိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ လမ်း (40) အထက်ဘ လောက်(7) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
209 Views March 12, 2019
1 L ( စ ပေါ် ငွေ -100 L)
ဗိုလ်တ ထောင်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်က လေးဈေးလမ်း ၊ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
163 Views March 12, 2019
အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ လှိုင်မြစ်လမ်း ၊ ကမ်းနားလမ်း ပထမထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
190 Views March 12, 2019
လှိုင်မြို့နယ် ၊ ဘုရင့် နောင် 9လမ်း ၊ချောင်းဝ ကျောင်းလမ်းနီ မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
185 Views March 12, 2019
လှိုင်မြို့နယ် ၊ သီရိ (5) လမ်း ၊ ပထမထပ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
193 Views March 12, 2019
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ အမှတ် (3) လမ်းမကြီး ၊ (4) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
191 Views March 12, 2019
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ပုဂံလမ်းမကြီး ၊ 1 ထပ်တိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။
183 Views March 12, 2019
ဗိုလ် တ ထောင်မြို့နယ် ၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဒုလ လမ်းကြား (11) လွှာ ရောင်းရန်ရှိသည်။
ဗိုလ်တ ထောင်မြို့နယ် ၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့်မဟာဗန္ဒုလ လမ်းကြား(5) လွှာရောင်းရန်ရှိသည်။
182 Views March 12, 2019
အလုံမြို့နယ် ၊ လှော်ကားလမ်း ၊ဆင်မင်းဈေးအနီး မြေညီိခေါင်းရင်းခန်းငှားရန်ရှိသည်။
275 Views March 12, 2019
အလုံမြို့နယ် ၊လှော်ကားလမ်း ဆင်မင်းဈေးအနီး ၊ မြေညီခေါင်းရင်းခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
221 Views March 12, 2019
​မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ Rose Part (2)2RC ရောင်းရန်ရှိသည်။
144 Views March 11, 2019
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ဓနသိဒ္ဒိလမ်း ၊2RC ငှားရန်ရှိသည်။
190 Views March 11, 2019
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ဓနသိဒ္ဒိလမ်း ၊2RC ရောင်းရန်ရှိသည်။
210 Views March 11, 2019
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ သရက်တောလမ်းဗဟိုလမ်းထောင့် ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
194 Views March 11, 2019
တာမွေမြို့နယ် ၊ ဘောက်ထော်အေးသာယာလမ်း ၊5လွှာတိုက်တတိုက်လုံးရောင်းရန်ရှိသည်။
223 Views March 8, 2019
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ စရည်းပင်လမ်းနှင့်သဇင်ပန်းလမ်းထောင့် ၊4လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
238 Views March 8, 2019
ဗိုလ်တ ထောင်မြို့နယ် ၊ 52 လမ်းအောက် (8) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
179 Views March 8, 2019
ရန်ကုန်တိုင်း / Hlegu
လှည်းကူးမြို့နယ် ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း ၊ 1ထပ် RC ငှားရန်ရှိသည်။
212 Views March 8, 2019
RENT5MBR HOUSE In Mayangone Township
225 Views March 8, 2019
Mandalay Region / ရန်ကုန်တိုင်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ 8 မိုင်မောရ၀တီလမ်း 1 ထပ်ခွဲ RC ငှားရန်ရှိသည်။
159 Views March 1, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ သစ္စာလမ်းနှင့် ၊မိုးကောင်းလမ်းကြား ၊ ပထမထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
227 Views March 1, 2019
တာမွေအ၀ိုင်းအနီး ၊ ရွှေညောင်ပင်ဒံပေါက်ဆိုင်အနီး HK2လွှာငှားရန်ရှိသည်။
229 Views March 1, 2019
တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ၊ အင်းဝလုံးချင်းအိမ်ရာ2RC ငှားရန်ရှိသည်။
244 Views March 1, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ရွှေ အုန်းပင်အိမ်ရာ၊ ပထမထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
266 Views March 1, 2019
သာကတေမြို့နယ် ၊ မြ ခွာညိုအိမ်ရာ6လွှာ Condo ငှားရန်ရှိသည်။
202 Views February 28, 2019
ပန်ဘဲတန်းမြို့နယ် ၊ မဟာဗန္ဒုလလမ်းထောင့် (9) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
278 Views February 22, 2019
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ စံပယ် (1) လမ်း ၊4လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိ့သည်။
196 Views February 22, 2019
ရန်ကုန်တိုင်း / Latha Township
လသာမြို့နယ် ၊ လမ်း 20 လမ်းအောက်ဘ လောက် (5) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသ
176 Views February 22, 2019
ဒဂုံမြို့နယ် ၊ သမ္မတ Condo (6) လွှာငှားရန်ရှိသည်။
228 Views February 22, 2019
ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ နတ်မောက်ရိပ်သာလမ်းနှင့်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းထောင့် (8) လွှာရောင်းရန်ရှိသည်။
209 Views February 21, 2019
အလုံမြို့နယ် ၊ဋ္ဌာနလမ်း (4) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
166 Views February 21, 2019
အလုံမြို့နယ် ၊ ဋ္ဌာနလမ်း (4) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
256 Views February 21, 2019
လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊မြေညီထပ်ငှားရန်ရှိသည်။
178 Views February 21, 2019
အလုံမြို့နယ် ၊ ဆန္ဒန်လမ်း ၊မြေညီထပ်ငှားရန်ရှိသည်။
162 Views February 21, 2019
ဗဟန်းမြို့နယ် ၊အောင်ဇေယျလမ်း (2) ၊ Golden Valley ၊ 2RC ငှားရန်ရှိသည်။
160 Views February 21, 2019
လသာမြို့နယ် ၊ 24 လမ်းအောက်လမ်း မြေညီတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
179 Views February 21, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ အရိယမဂ္ဂင်လမ်း (6) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
181 Views February 20, 2019
ရန်ကင်းမြိူ့နယ် ၊အရိယမဂ္ဂင်လမ်း ၊ (6) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
214 Views February 20, 2019
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ တန်း ၊စိန်ပန်းလမ်း 2ထပ်တိုက် ခန်းငှား
327 Views February 20, 2019
ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ပွင့်စန်းလမ်း ၊ 3လွှာ တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။ ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ
204 Views February 20, 2019
တာမွေမြို့နယ် ၊အေးသာယာလမ်း ၊2လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
164 Views February 20, 2019
သန်လျင် Star City ၊ (3) လွှာ ငှားရန်ရှိသည်။
144 Views February 19, 2019
ရန်ကုန်တိုင်း / Dagon Seikkan Township
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ဒဂုံသီရိလမ်း၊ ဆိုင်ခန်းအပေါ်ထပ်ငှားရန်ရှိသည်။
148 Views February 19, 2019
အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမ ၊ မြို့သစ်ဈေး က (3) လမ်း၊ 2ထပ်အိမ်ငှားရန်ရှိသည်။
164 Views February 19, 2019
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ဗြဟ္မစိုရ်လမ်း ၊3RC ငှားရန်ရှိသည်။
170 Views February 19, 2019
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ဗြဟ္မစိုရ်လမ်း ၊3RC ရောင်းရန်ရှိသည်။
371 Views February 19, 2019
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ လမ်း 50 အထက်ဘလောက်၊ ပထမထပ်ငှားရန်ရှိသည်။
180 Views February 19, 2019
မရမ်းကုန်းမြိူ့နယ်၊ သမိုင်းမုဒိတာအိမ်ရာ ၊ (7) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ စက်မှုဇုံ (1) လမ်း ၊ မြေညီ ငှားရန်ရှိသည်။
218 Views February 7, 2019
လှိုင်မြို့နယ် ၊ ကန်လမ်း လမင်းကွန်ဒို (6) လွှာ ငှားရန်ရှိသည်။
205 Views February 7, 2019
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းမပေါ်6လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
176 Views February 7, 2019
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ 54 လမ်းနှင့်ကုန်သည်လမ်းထောင့် 5လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
182 Views February 7, 2019
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ဗဟိုလမ်း (6) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
199 Views February 7, 2019
ပုဇွန်တောင် ၊ပေတောကုန်းလမ်း 5လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
149 Views February 5, 2019
ပုဇွန်တောင် ၊ပေတောကုန်းလမ်း (6) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
187 Views February 5, 2019
တာမွေမြို့နယ် ၊ ကျိုက္ကစံလမ်း မြေညီတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
224 Views February 5, 2019
ပုဇွန်တောင်ရေကျော်လမ်း (6) လွှာ ငှားရန်ရှိသည်။
162 Views February 5, 2019
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊လည်သန်လမ်း 2RC ငှားရန်ရှိသည်။
181 Views February 5, 2019
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ကေတုမာလာ(2) လမ်း 1ထပ် RC ငှားရန်ရှိသည်။
211 Views February 5, 2019
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ပဒေသာလမ်း ၊ ပထမထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
176 Views February 5, 2019
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ဗဟိုလမ်းအနီး ၊ မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
180 Views February 5, 2019
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ဗဟိုလမ်းအနီး မြေညီတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
165 Views February 5, 2019
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ဇေယျဝတီလမ်း ၊ မြေညီ တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
159 Views February 5, 2019
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၊ ရတနာပုံလမ်း မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်။
206 Views February 5, 2019
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၊ ကျောင်းကြီးလမ်း၊လုံးချင်းတိုက် ငှားရန်ရှိသည်။ ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ
168 Views February 5, 2019
တာမွေမြို့နယ် ၊ဖိုးစိန်လမ်း 3RC လုံးချင်းငှားရန်ရှိသည်။
307 Views February 5, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ကျောက်ကုန်း၊ မိုးကောင်းလမ်း (3) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
192 Views February 5, 2019
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊သီရိခေမာလမ်း ၊2RC ရောင်းရန်ရှိသည်။
178 Views February 4, 2019
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ သီရိခေမာလမ်း 2RC ငှားရန်ရှိသည်။။။
196 Views February 4, 2019
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်6းထပ်ခွဲတိုက်တတိုက်လုံးငှားမည်။ ပြုံ
200 Views February 4, 2019
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ Golden City 22 လွှာ Condo ငှားရန်ရှိသည်။
164 Views February 4, 2019
​ကျောက်မြောင်း ၊ သတိပဋ္ဌာန်လမ်း နှင့် ၊သမ္မာဒိဋ္ဌိလမ်ထောင့် တတိယထပ်တိုက်ခန်း ငှားရန်ရှိသည်။
181 Views February 4, 2019
ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ Novotel အနီး2RC ငှားရန်ရှိသည်။
151 Views February 4, 2019
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုမင်္ဂလာလမ်းပေါ်3ထပ်တိုက်ခန်းတွဲ ငှားရန်ရှိသည်။
183 Views February 4, 2019
တာမွေမြို့နယ် ၊ ယုဇန ပလာဇာနောက်ဘက် အေင်မင်္ဂလာလမ်း ပထမထပ် တိုက်ခန်ရောင်းရန်ရှိသည်။
214 Views February 4, 2019
တာမွေမြို့နယ် ၊ယုဇနပလာဇာနောက်ဖက် ၊အောင်မင်္ဂလာလမ်း ပထမထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
222 Views February 4, 2019
ပန်ဘဲတန်းမြို့နယ် ၊ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း ပထမထပ် ၊ တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
179 Views February 4, 2019
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ လမ်း (50) ၊ ပထမထပ် တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
194 Views February 4, 2019
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (7) မိုင် ကုန်းမြင့်ရိပ်သာ၊အောင်သီဟလမ်း (2) ထပ် RC ငှားရန်ရှိသည်။
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၊ 53 လမ်း ( 2) ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်။
172 Views February 4, 2019
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ သီရိမွန်လမ်း ပထမထပ်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
162 Views February 4, 2019
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ စရည်းပင်လမ်း ၊စိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်(1) ထပ်ခွဲ RC ငှားရန်ရှိသည်။
193 Views January 23, 2019
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ကန်ရိပ်သာလမ်း 2RC လုံးချင်းငှားရန်ရှိသည်။
167 Views January 23, 2019
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ၊ ဒေါ်သိန်းတင်လမ်း မြေညီတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
200 Views January 23, 2019
မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ် ၊ ဒေါ်သိန်းတင်လမ်း (2) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
189 Views January 23, 2019
စမ်ချောင်းမြို့နယ် ၊ သရက်တောလမ်း (3) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
170 Views January 23, 2019
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ သရက်တောလမ်း (2) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
187 Views January 23, 2019
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်9မိုင်၊ 2RC ငှားရန်ရှိသည်။
152 Views January 22, 2019
တ/ဥက္ကလာပမြို့နယ် မေတ္တာလမ်းပေါ် (8) လွှာအပေါ်ဆုံးထပ် minicondo ရောင်းရန်ရှိသည်။
174 Views January 22, 2019
တ/ဥ မေတ္တာလမ်းမပေါ် (8) လွှာ Condo ငှားရန်ရှိသည်။
188 Views January 18, 2019
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာလမ်း (5) လွှာ တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
175 Views January 18, 2019
လစာ-1L စပေါ်ငွေ -100 L
အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမ ၊ က(3) လမ်း 2RC ငှားရန်ရှိသည်။
162 Views January 18, 2019
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ သဒ္ဒါလမ်း 2RC လုံးချင်းငှားရန်ရှိသည်။
250 Views January 18, 2019
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (8) မိုင် ၊မောရ၀တီ တထပ်ခွဲလုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်။
160 Views January 18, 2019
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ခရေမွန်ရိပ်မွန်2RC လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်။
173 Views January 18, 2019
ကျောက်တံတားမြို့နယ် (39) လမ်းအပေါ်ဘလောက် ၊မြေညီတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ ဗိုလ်ချူပ်လမ်းနှင့်၊သိမ်ဖြူလမ်းထောင့် မြေညီတိုက်ခန်းငှားမည်။
165 Views January 18, 2019
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊မြေနီကုန်း ၊ ဒဂုံတာဝါ (2) ၊ (12) လွှာငှားရန်ရှိသည်။
185 Views January 18, 2019
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၊ရေကျော်လမ်းမကြီး (7) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
167 Views January 18, 2019
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း Condo (5) လွှာငှားရန်ရှိသည်။
156 Views January 18, 2019
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းမပေါ် (5) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
177 Views January 18, 2019
မြောက်ဒဂုံ ၊ ဗထူးအေးရိပ်သာလမ်းမပေါ် 2RC လုံးချင်းငှားရန်ရှိသည်။
186 Views January 17, 2019
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရေတာရှည်လမ်း ၊ Condo (4) လွှာငှားရန်ရှိသည်။
167 Views January 17, 2019
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ် (3) လွှာတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
175 Views January 17, 2019
တ/ဥ မြို့နယ် (7) ရပ်ကွက် သီရိဇေယျာလမ်း-20 ၊ လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်။
164 Views January 17, 2019
(7)မိုင်၊ကုန်းမြင့်ရိပ်သာတွင် (40’X60′) မြေကွက်ရောင်းမည်
233 Views December 4, 2018
သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့နယ် မြေညီတိုက်သစ် ရောင်းမည်။
276 Views November 26, 2018
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြဈေးအနီး (5) လွှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်။
263 Views November 12, 2018
ွမြောက်ဒဂုံ (33) ရပ်ကွက် 2RCရောင်းမည်။
230 Views November 9, 2018
ွမြောက်ဒဂုံ (33) ရပ်ကွက် 2RC ငှားမည်။
302 Views November 9, 2018
187 Views November 9, 2018
စမ်းချောင်း၊မြေနုကွန်ဒို (3) လွှာ ငှားမည်။
214 Views November 9, 2018
တာမွေမြို့နယ် အရှေ့မျဉ်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ပထမထပ် ၊ရောင်းမည်။
249 Views November 9, 2018
တာမွေမြို့နယ် အရှေ့မျဉ်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ပထမထပ် ၊ ငှားမည်။
242 Views November 9, 2018
217 Views November 9, 2018
ခရေပင်လမ်းခွဲ၊ 2RC ငှားမည်။
264 Views November 9, 2018
ကြည့်မြင်တိုင်၊ (6) လွှာ တိုက်ခန်းငှားမည်။
191 Views November 9, 2018
လေဆိပ်ရိပ်သာလမ်းသွယ် (1)2RC ရောင်းမည်။
221 Views November 9, 2018
လေဆိပ်ရိပ်သာလမ်းသွယ် (1)2RC ငှားမည်။
212 Views November 9, 2018
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၊43 လမ်း( 2) လွှာငှားမည်။
225 Views November 9, 2018
51 လမ်း (8)လွှာ တိုက်ခန်းငှားမည်။
​ဝေဘာဂီလမ်းမကြီးပေါ်ဆိုင်ဖွင့်ရန်နေရာကောင်း(60′ x 60′)’မြေငှားမည်။
246 Views November 9, 2018
မြောက်ဥက္ကလာဈေးရှေ့၊ တိုက်ခန်း (မြေညီ) ငှားမည်။
222 Views November 9, 2018
အင်းစိန်မြို့နယ် ( ပထမထပ်) တိုက်ခန်းငှားမည်။
189 Views November 9, 2018
သာကေတ၊ သဒ္ဒါရုံလမ်း ၊ (18 ‘×54’) မြေညီ(ထပ်ခိုးပါ)ငှားမည်။
309 Views November 9, 2018
မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ်၊2ထပ်ခွဲ RC တိုက်သစ်ငှားမည်။
215 Views November 9, 2018
ဒဂုံတာဝါ ၊ ၈ထပ် ရောင်းမည်။
240 Views November 8, 2018
ဒဂုံတာဝါ ၊ ၈ထပ် ငှားမည်။
267 Views November 8, 2018
မလိခ mini condo ​မြေညီထပ်ငှားမည်။ (ပရိဘောဂစုံ)
200 Views November 8, 2018
မင်္ဂလာတောင်ညွှန်မြို့နယ် Mini ကွန်ဒို(6) လွှာငှားမည်။
219 Views November 8, 2018
242 Views November 8, 2018
214 Views November 8, 2018
266 Views November 8, 2018
လမ်းမတော်မြို့နယ် ဟောင်ကောင် (2) လွှာရောင်းမည်။
201 Views November 8, 2018
လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ဟောင်ကောင် (2) လွှာငှားမည်။
211 Views November 8, 2018
187 Views November 8, 2018
အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ 2ထပ်ပျဉ်းတော်သင်ရောင်းမည်။
228 Views November 8, 2018
အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ 2ထပ်ပျဉ်းတော်သင်ငှားမည်။
204 Views November 8, 2018
အင်းစိန်မြို့၊ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်( 2)ထပ်ခွဲ RC ငှားမည်။
403 Views November 8, 2018
ရန်ကင်း၊မြနန္ဒာလမ်း ၊ (2) ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်။
202 Views November 8, 2018
ရန်ကင်း ၊ ရွှေယင်းမာလမ်း1RC ငှားမည်။
194 Views November 8, 2018
ရန်ကင်း၊မြယင်းမာလမ်း ၊1 ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ငှားမည်။
348 Views November 8, 2018
343 Views October 30, 2018
စကားဝါအိမ်ရာ (4) လွှာ ကွန်ဒိုရောင်းမည်။
263 Views October 27, 2018
24 လမ်း​မြေညီ၊ နှစ်ရှည်ငှားလို ဆိုင်းခန်းသင့်
191 Views October 27, 2018
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (၉) ရပ်ကွက် လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်။
163 Views October 16, 2018
တာမွေးအ၀ိုင်းလေးအနီး (5)လွှာ ကွန်ဒိုရောင်းမည်။
220 Views October 15, 2018
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ကြည့်မြင်တိုင်ညဈေးအနီးရှိ ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်
260 Views October 12, 2018
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ အင်းစိန်လမ်းမရှိ ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း
184 Views October 12, 2018
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးအနီးရှိ ရောင်းရန်ရှိသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း
185 Views October 12, 2018
ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင်၊ Delta plaza ရှိရောင်းရန်ရှိသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း
256 Views October 12, 2018
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၄၁)ရပ်ကွက်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော လုံးချင်းRC4ထပ်ခွဲတိုက်သစ်
174 Views October 12, 2018
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ၃၉ A ရပ်ကွက်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်
222 Views October 11, 2018